Online Nepali News, Himali News, Himali sandesh, Live News » गाायक हुनुमा गर्व लाग्छ : लाक्पा शेर्पा
९ आश्विन २०७४ |
“झस्केर दुक्छ यो मुटु मेरो उनैको यादमा ,
राखेको थिए उसलाई मैले दिलको माजमा”
भन्ने चर्चित गीत गाएर राष्ट्रिय गायक एवम् शेर्पा समुदायको पहिलो शेर्पा गायक हुन लाक्पा शेर्पा । गायक शेर्पा इलाम जिल्लाको चमेत गा.वि.सका स्वा. दावा शेर्पा तथा स्वा. पासाङ् फुट्टी शेर्पाको कोखबाट २०२० सालमा कान्छा छोराको रुपमा जन्मनु भएका हुन ।
शेर्पाले सर्वप्रथम गायनको सुरुवात दार्जिलिङ्मा पढ्दा गो.दु.नि.साले बर्षैनी आयोजना गर्ने गायन प्रतियोगितामा भाग लिइ त्यस प्रतियोगिताको जितसगैँ लगातार गायन क्षेत्रमा लागि परेका छन । उनले all india radio बाट गित गाउन थालेका हुन । जिवनमा all india radio बाट विस २०४० सालसम्म ६० ओटा गित गाएका थिए । विस २०४१ सालसम्म रेडियो नेपालबाट ३० ओटा गित रेकर्ड गरेका थिए । भने पाश्र्व क्षेत्रमा विस २०४५ साल सम्म १५ ओटा गित गाएका थिए । गायक शेर्पामा उनको चर्चित एल्मब शुभेच्छु, झस्केर दुक्छ, लाक्पा, super hits of lakpa, Mood of lakpa चर्चित एल्वम् हुन ।
शेर्पा “गो.दु.नि.स, दार्जिलिङ २०४०, रत्न रेर्कडिङ संस्थान २०४१, रेडियो नेपाल २०४२ ”बाट पुरस्कृत भएका छन । र लायन्स क्लव अफ सोलुखुम्बु, TAAN (Trekking Agent Association of Nepal), नेपाल शेर्पा विद्यार्थी मञ्च, नेपाल शेर्पा संघ, हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रबाट सम्मानित हुनुभएका छन् ।
प्रया शेर्पा समुदाय पर्यटन व्यावसाय एवम् बैदेशिक रोजगारिमा जाने गर्छ भने गायक लाक्पा शेर्पा विस २०३१ साल देखि अहिलेसम्म सांगितीक क्षेत्रमा लागि परेका छन् । यिनै चर्चित राष्ट्रिय गायक एवम् शेर्पा समुदायको पहिलो शेर्पा गायक लाक्पा शेर्पासँगको कुराकानी ।
हिमाली सन्देश डटकममा स्वागत छ
हजुर धन्यावाद ।
हजुर आजकाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
हाल विषेश गरि नया गितहरु रेकडिङ गर्नमा र भविष्यमा हुने कार्यक्रमको तयारीमा व्यस्त छु ।
तपाइ गायन क्षेत्रमा कसरी लाग्न सफल हुनु भयो ?
हजुर यो प्रश्न मलाई सवैले सोध्ने गर्छ । एन.टिभीले लिएको अन्तरवार्तामा पनि यो प्रश्न सोधेको थियो । प्रया शेर्पा समुदाय पर्यटन व्यावसायमा लागेका बेला तपाई कसरी गायक बन्नु भयो ? भनी सोधेका थिए । हजुर म गायन क्षेत्रमा विद्यार्थी हुदा साथीहरुको संगतले गर्दा नै लागेको हु । भनिन्छ नि संगत गुणाको फल हो ।
तपाइ राष्ट्रिय गायक एमव् पहिलो शेर्पा गायक हुनुहुन्छ । आफुलाई कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ ?
अव कस्तो भन्नाले मलाइ खुसी एवम गर्व लाग्छ । अन्य शेर्पा पर्यटन व्यावसायमा लागेको बेला आफु गायन क्षेत्रमा लाग्न पाउदा र सांगितिक क्षेत्रमा आफ्नो नाम आउदा खुसी एवम् गर्व महसुज हुन्छ ।
जव तपाईको पहिलो एल्वम बजारमा आउदा कस्तो अनुभव भयो ?
आफ्नो पहिलो एल्वम बजारमा आउदा खुसी लागेको थियो । सवैभन्दा पहिला त जव मैले अलिन्डीय रेडियोमा गित गाए त्यो दिन म अत्यन्तै खुसी भएको थिए त्यो क्षण अहिले पनि सम्जिदा अत्यन्तै खुसी लाग्छ । त्यस समयमा गितहरु प्रया रेडियोमा गाएर प्रत्यक्ष प्रसारण हुने ग¥थौँ भने अहिले पो गितलाई रेकर्ड गरि राख्ने गरिन्छ त्यस समयमा गित रेडियोमा गएर गाउनु प¥थ्यौ ।
अल इन्डिय रेडियोमा गित गाउने अवसर कसरी पाउनु भयो ?
कसरी पाए भन्दा मेरो जन्म इलाममा भए पनि शिक्षा दार्जिलिङबाट भएको हो । त्यहा रहदा गो.दु.नि.साले बर्षैनी गायन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने ग¥थौ । त्यही समयमा म पनि भाग लिएर प्रतियोगिता जित्न सफल भएपछि अलइन्डिय रेडियोको प्रतिनिधि आएर आवाज जाच गरि राम्रो भएकोले गर्दा मैले अलइन्डिया रेडियोमा गित गाउने अवसर पाए । अहिले जति पनि सांगितिक क्षेत्रमा रहेका सास्तीहरु अमर गुरुङ, गोपाल योञ्जन, नारायण गोपाल अरुण लामा रहेका छन उनीहरु सवै गो.दु.निसाले आयोजना गरेको प्रतियोगिता जितेर नै सांगितिक क्षेत्रमा लाग्न सफल भएको हो ।
गायन क्षेत्रमा गायकहरुलाई कतिको सजिलो छ ।
अव अरुलाइ त सजिलो भयो होला । तर मलाइ भने पहिला पहिला गायन क्षेत्रमा शेर्पा भएकोले गाह्रौँ नै भएको थियो । आफुले चिनेको र पहुचका मानिसहरु कोही नभएकोले गर्दा अलि गाह्रौ भएको थियो । त्यस समयमा आफै मेहेनत गरेर अहिले गायन क्षेत्रमा सफल हुन पुगेको छु । आफैले मेहेनत गरेर नै यहा सम्म पुगेको छु र भनिन्छ नी आफु असल भए अरुले पनि असल देखिन्छ । म आफु असल व्यातिm भएकोले गर्दा सवैको मायाले गर्दा त्यति गाह्रो भएन ।
प्रया शेर्पा समुदाय पर्यटन र बैदेशिक रोजगारमा जाने गर्छ तर तपाइ गायन क्षेत्रमा लाग्नु भयो तपाइलाइ कस्तो अनुभव हुन्छ ?
मलाइ मेरो देश प्यारो लाग्छ । जे होस आफ्नै देश र माटोमा बसेर राष्ट्र, जन्मभुमिको र समाजको सेवा गर्न पाउदा आफुलाई स्वाभिमान ठान्छु । जे होस सांगितिक क्षेत्रमा लागेर धन सम्पति कमाउन नसकेपनि स्रोता, दर्शक र जनताको माया पाउन सफल भएकोमा खुुसी छु ।
आजकाल बजारमा नाम कमाउनका लागि गित गाउनेहरुको विगविगी रहेको छ यसलाई तपाइ कुन रुपमा हेर्नु हुन्छ ?
अहिले चाहि कस्तो भने रेकर्डिङ प्रविधिहरु कस्तो आएको छ भने एक लाइन गित गायो पेस्टिङ गर्दै अर्को रेकर्ड गर्ने गरिन्छ । भने पहिला हाम्रो समयमा महिनौ दिन रियाज गरेर गित गाउनु पर्थौ । अहिले त्यस्तो गर्नु पर्दैन प्रविधिको विकासले अहिले एउटा लाइन गायो फेरि पेस्टिङ ग¥यो त्यही भएर सजिलो भएको छ । गाउन मिल्छ । गित गाउनका लागि सुर तालको आवश्यकता पर्छ । तर आजकाल प्रविधिको विकास र मिडिया माफियाले जसलाई पनि गायक बनाउने गरेको छ । प्रचार प्रसारका लागि अहिलेका गायक बढी नै छन भने पहिलाका हस्तीहरु कमै मात्रमा मिडियामा आउने गर्छ ।पहिलाका गायकहरुलाई मिडियामा ल्याएर उनीहरुको कृतिलाई मिडियाले प्रचार गरे अवस्य यो क्षेत्र राम्रो हुने थियो ।
अहिले र पहिलेको गितमा तपाई के भिन्नता पाउनु हुन्छ ?
भिन्नता त छ । पहिलाको गितहरुमा लेखन, शव्द भावहरु राम्रो हुने ग¥थौँ । अहिलेको गितहरु लेखाइमा कमी आएको जस्तो लाग्छ । अहिले प्रविधिले गर्दा सवैलाई गायक भन्न सकिन्छ । प्रविधिले गर्दा सजिलो बनाइ दिएको छ । पहिलेका गायक नारायाण गोपाल अरुण लामा, गोपाल योञ्जन जस्ताका गितहरु अहिले सुन्दा पनि सदाभार र ताजा लाग्छ । तर आजकालका गितहरुमा कमि आएको हो जस्तो लाग्छ ।
गायन क्षेत्रमा लागेर जिविकोपार्जन गर्न सकिन्छ ?
अव विशेष त हाम्रो देश सानो छ । संगित भनेको रमाइलोको लागि हो त्यसले गर्दा बजार सानो छ । अहिले आएर प्राइभेसिका कुराहरु आइ रहेको छ । अहिले इन्रनेटमा फ्रि डाउनलोडले गर्दा र गाए बापत रोयाल्टी नआउनले अलिक गाह्रो भएको छ भने अहिलका युवा गायकहरुले भने विदेशमा गित गाएर जिविकोर्पाजन गर्ने गछ । अव पछिपछि यो पनि अलि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ ।
प्रया शेर्पा समुदाय अर्थिकउर्पाजनका गर्न लागि परेका बेला तपाई गायन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ कस्तो लागिरहेको छ ।
अ मैले भनि हाले नि मलाई आफुलाई राष्ट्रिय गायक हुदा र दर्शकले मन पराइदिएकोमा र सम्मान गरेको छ यो नै मेरो लागि ठुलो सम्पति हो जस्तो लाग्छ र म यसमा नै खुसी छु ।
लाक्पा शेर्पा साङ्गितीक कोषको स्थापना गर्नु भएको छ यसले हाल के कार्य गर्दै आइ रहेको छ ?
अव विषेश यो चाही नमस्ते इन्टरटेनमेन्टका संचालक पाल्देन शेर्पाले एक बर्ष पहिला भृकुटी मण्डल राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको एकल गायनको समयमा खेलेको संस्था हो । यस संस्थाले भविष्यमा गायन क्षेत्रमा लागेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई आरक्षण दिने लक्ष्य रहेको छ । यस संस्थाका लागि एकल गायन विदेशमा पनि गरि त्यहाँबाट आएको रकम सवै संस्थामा राखि जेष्ट नागरिकलाई अस्पतालमा बेर्ड लिइ अरक्षण दिने लक्ष्य यस संस्थाको रहेको छ ।
गायन क्षेत्रमा लागेकालाई सरकारबाट सम्मान पाएको छ की छैन ?
अव सरकारी क्षेत्रबाट सहयोग चाही गरको जस्तो लाग्दैन जस्तै सांगितिक क्षेत्रमा लागेकाहरु विरामी हुदा उपाचार नभएर मृत्यु भएर अत्यष्टीका लागि पैसा नभएर साथीहरु मिलेर पैसा उठाएर अत्यष्टी गरेको छ । मेरो अनुभवमा कलाकारलाई राष्ट्रिय गहना भनिन्छ तर जर्गेना गनुपर्छ भनि पहल चाही नगरेको जस्तो लाग्छ ।
तपाईलाई अहिलेको गायन प्रविधिमा कतिको वित्रृmति भएको जस्तो लाग्छ ?
यो त तपाई हामी सवैले अनुभव गरेको कुरा हो । गीत भनेको कै सुन्ने हो । सुनेर आनन्द लिने हो अहिले गीत देखाउने भएको छ । देखाउनेमा पनि अश्लियत कुराहरुलाई देखाएर गितलाई माथि लाने चलनचल्ती रही आएको छ । यो एक प्रकारको ठुलो बिक्रिती जस्तो लाग्छ । गित भनेको राम्रो शव्द, सुर, ताल, लय भएकोलाई हामी गित भन्छौँ त्यही भएर सांगितिक क्षेत्रमा अलि विक्रीती आएको होकी जस्तो लाग्छ ।
सर्वप्रथम मलाइ लाक्पा शेर्पा भनी चिन्नुहुने र मेरो गित सुनिदिनु सवैमा धन्यावाद दिन चाहन्छु । यसरी नै मेरो गीतहरु सुनिदिनु होला । भविष्यमा अझ राम्रा राम्रा गीतहरु लिएर आउने छु । मेरो गीत सुन्न मन लागेमा युटुवमा गइ जिबपउब क्जभचउब कयलन टाइप गरि सुन्न सक्नु हुने छ मलाई यसरी नै माया गरिदिनु भयो भने म सधै तपाईहरुको माझमा नै रहने छु ।
प्रकाशित मिति ९ आश्विन २०७४, सोमबार ११:४०